ဇော်မင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ဇော်မင်း အမည်ရှိ အခြားပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် ဇော်မင်း (သံတူကြောင်းကွဲ) ကို ကြည့်ပါ။
အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး
၃၀ မတ် ၂၀၁၁ – ၂၈ ဩဂုတ် ၂၀၁၂
၃၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၁ – ၂၀ မတ် ၂၀၁၁
(1951-10-30) ၃၀ အောက်တိုဘာ၊ ၁၉၅၁ (အသက် ၆၈)
ဦးဇော်မင်း သည် မြန်မာနိုင်ငံ အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ တပ်မတော် (ကြည်း)မှ ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ဖြင့် အငြိမ်းစားယူခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ဩဂုတ် ၂၈ ရက်နေ့တွင် ဝန်ကြီးရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခဲ့သည်။
၁၉၉၈ ခရစ္စတီးကျွန်း ပစ်ခတ်မှု[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၉၉၈ မေလတွင် ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းသည် ခရစ္စတီးကျွန်းသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ကျွန်းပေါ်ရှိ သစ်ဝါးခုတ်သည့် လူ ၅၉ ဦးအား ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏ အမိန့်ဖြင့် ပစ်သတ်ခဲ့သည်။ များမကြာမီ ခရစ္စတီးကျွန်းအနီး ရောက်ရှိလာသည့် ထိုင်းငါးဖမ်းလှေတစ်စီးကို ဖမ်းဆီးကာ ပါလာသော လူ ၂၂ ဦးအား သတ်ကာ ကျွန်းပေါ်တွင် မြှုပ်နှံခဲ့သည်။
↑ Magwe Division။ Alternative Asean Network on Burma။ 15 April 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ Kudo, Toshihiro (26 July 2011). "New Government in Myanmar: Profiles of Ministers". Institute of Developing Economies - Japan External Trade Organization.
↑ http://www.theaustralian.com.au/news/defector-tells-of-burmese-atrocity/story-e6frg6t6-1111116576033, Defector tells of Burmese atrocity , The Australian, June 09, 2008
↑ As Myanmar Opens Up, Idyllic Islands Remain Unwelcoming, New York Times, By THOMAS FULLER, April 25, 2012, http://www.nytimes.com/2012/04/26/world/asia/as-myanmar-opens-up-idyllic-islands-remain-unwelcoming.html?pagewanted=all&_r=0
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဇော်မင်း&oldid=416160" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၈ ဩဂုတ် ၂၀၁၈၊ ၁၇:၂၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။